ရယူရန် *118*3*8*1# သို့ ခေါ်ပါ၊ သို့မဟုတ်
28120 သို့ SOS2 သို့မဟုတ် SOS3 သို့မဟုတ် SOS5 ဟု ပို့ပါ
1. ဝန်ဆောင်ခ - နောက်တစ်ကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်သောအခါ ကြိုတင် ငွေကြိုပေးဖုန်းခရက်ဒစ်နှင့် ဝန်ဆောင်ခတို့ကို ကောက်ခံပါမည်။
2. အကျုံးဝင်မှု - ကြိုတင်ပေးသော RM1 ခရက်ဒစ်တိုင်းသည် 1 ရက် သက်တမ်းရှိပါသည်။
တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် Hotspot Booster နှင့် Turbo Booster အများအပြား လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
မရပါ၊ အမျိုးအစားတူ Booster များကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ အများအပြားဝယ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ အသစ်ထပ်မယူမီတွင် လက်ရှိ Booster ကိုယ်တာ သို့မဟုတ် သက်တမ်း ကုန်သည်အထိ စောင့်ရပါမည်။ ဥပမာ - Hotspot Booster2ခုကို တစ်ပြိုင်နက် မလျှောက်နိုင်ပါ။ သို့သော် Hotspot Booster နှင့် Turbo Booster နှစ်မျိုးစလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ဝယ်နိုင်ပါသည်။ Booster နှစ်မျိုးစလုံးကို ဝယ်ယူပါက ဟော့စပေါ့သုံးစွဲမှုအားလုံးကို Hotspot Booster ထဲမှ သုံးမည်ဖြစ်ပြီး အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကိုယ်တာကို မြန်နှုန်းအကန့်အသတ်မရှိ ရယူနိုင်ပါသည်။
အပိုထပ်ဆောင်းများကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် GX12/ GX30 ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုပါက Hotspot Booster နှင့် Turbo Booster တို့၏ ကိုယ်တာနှင့် သက်တမ်းတို့ ဘာဖြစ်မည်နည်း?
Booster များ၏ လက်ကျန် ကိုယ်တာနှင့် သက်တမ်းကို ပယ်ဖျက်ပါမည်။ မသုံးဖြစ်သော ကိုယ်တာ သို့မဟုတ် သက်တမ်းအတွက် ငွေပြန်အမ်းမည် မဟုတ်ပါ။
Turbo Booster နှင့် Hotspot Booster တို့ကို မည်သို့ လျှောက်ထားရမည်နည်း?
အောက်ပါတို့မှတစ်ဆင့် အဆိုပါ Booster များကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
My UMobileApp – Add-Ons မီနျူး
UMB - *118*1# ကို ခေါ်ပါ
SMS – ON TURBO (Turbo Booster အတွက်) သို့မဟုတ် ON HOTSPOT (Hotspot Booster အတွက်) ကို 28118 သို့ ပို့ပါ
လက်ရှိ Booster ၏ 1GB ကို RM10 ဖြင့်3ရက် အား ဆက်လက် ရယူနိုင်ပါသလား?
ရပါတယ်၊ Hotspot နှင့် Turbo Boosters များနှင့်အတူ ပုံမှန် Booster ကို ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့ဟော် Booster3ခုစလုံး၏ သက်တမ်းသည် လျှောက်ထားမှု အောင်မြင်သည်မှ စတင်ပါသည်။ အကြံပြုလိုသည်မှာ သင့်အစီအစဉ်သည် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကိုယ်တာ ဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန် Booster အစား Turbo Booster အား အမြဲဖွင့်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်းကုန် ကာလတွင် အစီအစဉ်ပြောင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသလား?
မရပါ။ အစီအစဉ်ပြောင်းခြင်းကို သုံးစွဲကာလအတွင်းသာ ခွင့်ပြုပါသည်။
Unlimited Power မှ Unlimited Funz Plan သို့ မည်သို့ ပြောင်းမည်နည်း?
UMB မှ *118*6*2*3# သို့ ခေါ်ပြီး ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Unlimited Power Prepaid အစီအစဉ်ကိုသာ နှစ်သက်ပါသည်။ Unlimited Funz Plan မှ ယခင် အစီအစဉ်သို့ ပြန်ပြောင်းနိုင်ပါသလား?
ရပါတယ်၊ Unlimited Power Prepaid အစီအစဉ်သို့ ပြန်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
အစီအစဉ်များ ပြောင်းရာတွင် လက်ရှိရနေသော အထူးအစီအစဉ်များအတွက် ဘာဖြစ်မည်နည်း?
အစီအစဉ်သစ်သို့ ပြောင်းပါက အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ရယူထားမှုများကို ပယ်ဖျက်ပါမည်။
အစီအစဉ်သစ်များသို့ ပြောင်းပါက အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက်ကို ချက်ချင်းရမည်လား?
အစီအစဉ်သစ်သို့ ပြောင်းခြင်း အောင်မြင်ကြောင်း မည်သည့်အချိန်တွင် သိနိုင်မည်နည်း?
အစီအစဉ်ပြောင်းခြင်း အောင်မြင်ပါက SMS ပို့ပါမည်။ SMS ရပြီးပါက အခမဲ့ဒေတာ ရယူရန် ငွေဖြည့်နိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်သည် အခြား မိုဘိုင်းလိုင်းတစ်ခု သုံးနေပါည်။ U Mobile ၏ Unlimited Funz Plan သို့ ပြောင်းနိုင်ပါသလား?
ရပါတယ်။ အနီးဆုံး U Mobile စတိုး/ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင် များသို့ သွားရောက်ပါ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း https://u.com.my/support/switch-to-u တွင် ပြောင်းပါ။
UMI/GX အစီအစဉ်များကို မည်သို့ ရယူမည်နည်း?
UMB, SMS နှင့် MyUMobile App တို့မှ တစ်ဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိရန် အောက်ပါတို့တွင် လေ့လာပါ-
Giler Unlimited Data: https://www.u.com.my/plans/gilerunlimited/prepaid
50% off Service Fee for MaxMoney Remittance Service Campaign Giler အကန့်အသတ်မဲ့ ငွေကြိုပေး သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများ ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ Unlimited Funz Prepaid Plan စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ